रामेछाप नगरपालिकाको सबै वस्तीमा सडक पुर्‍याउन सफल भयौं : उप-प्रमुख खड्का « News24 : Premium News Channel
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका इमान्दार र विकासप्रति लगाव भएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पालिकामा विकास निर्माणका कामहरु गरेर देखाएको उदाहरण धेरै ठाउँमा देख्न पाइन्छ । पालिकाको विकास नै आफुहरुको जिम्मेवारी र दायित्व हो भन्ने ठान्नेहरुले गर्छन पनि त्यही । पालिकावासीको चाहना र रोजाई बुझेर अघि बढ्नेहरुले पालिकावासीको मन पनि जित्दै आएका छन् । यस्तै उदाहरण देखिएको छ – रामेछाप नगरपालिकाका पनि । यो नगरपालिकाले पालिकाको विकास र जनताको चाहनालाई सर्वोपरि राख्दै आएको छ । रामेछाप नगरपालिकामा भएका के के छन् त ? यो विषयमा केन्द्रित रहेर रामेछाप नगरपालिकाकी उपप्रमुख सिर्जना खड्कासंग न्यूज २४ नेपाल डट टिभीका लागि आशुतोष अर्यालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :-
तपाईहरु निर्वाचित भएर आउनु भएपछि आम जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका के के काम भयो ?
भूकम्पले थलिएको अवस्थामा हामी निर्वाचित भएका थियौ । आवाशीय संरचना तथा घरहरु पूर्ण रुपमा बन्ने अवस्थामा थिए । सुरुको अवस्थामा हाम्रो नगरमा बाटो घाटो पुर्ननिमार्ण सामग्री आवश्यक हुने भएकाले प्रत्येक वस्तीहरुमा सडक पुर्‍याएर पुर्न निमार्णको कामलाई तीब्रता दियौ । रामेछाप नगरपालिका सुख्खा क्षेत्रमा पर्छ । यस ठाँउमा खानेपानीको व्यापक समस्य भएकाले आठ वटा लिफ्टिङ सिस्टमबाट खानेपानीको व्यवस्था गर्यौ । स्वास्थ्यमा पँहुच कम भएका ठाँउहरुमा स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरोन्नतिका साथै नगरवासीहरुलाई निशुल्क औषधिको व्यावस्था गरेका छौ ।
नगरपालिकाको विकास निमार्णका कामहरु कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
विकास निमार्णका काममा हामीले अहिले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाई रहेका छौ । पूर्वाधार नभएका ठाँउहरुमा हामीले पालिका वडा भवनहरु निर्माण गरेका छौ । खेल मैदान नभएका ठाँउहरुमा खेल मैदानहरु बनाएका छौ । पालिकाको सबै वडा गाँउ वस्तीहरुमा सडक पुर्‍याउन सफल भएका छौ ।
विश्वव्यापी माहामारी कोरोना कालमा के के कठिनाईहरु भोग्नु भयो । कोरोनाबाट विस्थापितहरुलाई पुन:स्थापित गर्न तपाईहरुको योजना के के छ ?
हामी भाग्यमानी जनप्रतिनिधि परेका छौ यो विश्वव्यापी माहामारीको समयमा हामीले जनताको घर घरमा गएर सेवा गर्न पायौ । सुरुको अवस्थामा हामी सबै डराएका थियौ । काठमाण्डौमा घर भित्र थुनिएका हाम्रा नागरिकहरुलाई नि:शुल्क घरमा पुर्‍यायौ कोरोना कालमा प्रत्येक वडामा जनचेतना फैलाउनका लागि हामी सफल भयौ । प्रदेश सरकारबाट जम्मा १२ लाख बजेट आएको थियो । हामीले सीमित श्रोत साधनबाट पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्यौ जस्तो लाग्छ ।
चुनावका बेला बोलेका र तपाईहरुको घोषणपत्रमा भएको कुराहरु कत्ति पूरा भए ?
पक्कै पनि हामी राजनीतिक एजेण्डा बोकेरै नागरिकको मन जित्न सफल भएका छौ । नगरको आवश्यकता पहिचान गरी नगरको विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । १०० प्रतिशत नजिता दिन नसके पनि नगरबासीहरुलाई हामीले हाम्रो कामबाट सन्तुष्ट पारेका छौ ।
रामेछाप नगरपालिका जुनार र बेमौसमी तरकारीका लागि प्रख्यात मानिन्छ । जुनार खेतीको विस्तार तथा बेमौसमी तरकारीको प्रर्वद्धन गर्न तपाईहरुको रणनीति के छ ?
हाम्रो आयश्रोतको बाटो जुनार र गेडागुडी हो । रामेछाप नगरपालिका जुनार खेतीमा प्रख्यात रहेको छ । जुनारका लागि हामीले शीतभण्डारको व्यवस्था गरेका छौ । किसानहरुलाई कृषिमा प्रेरित गर्नका लागि पचास प्रतिशत अनुदानमा मल र बीउको व्यावस्था गरेका छौ । केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहयोगमा जुनार खेतीको पकेट क्षेत्रहरु निमार्ण भएको छ । कृषिको विकासका लागि कृषकहरुलाई सामुहिक खेती तर्फ आकर्षित गर्ने स्कीमहरुको व्यवस्था गरेको छौ । नगरपालिका घाटाको बजेटमा रहँदा पनि हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता साथ कृषकहरुको व्यवसायिक हितका लागि कार्यक्रमहरु अगाडि बढारहेका छौ ।
तपाईको पालिकालाई आम मानिसले चिन्ने विशेषता के हो ? पर्यटकीय ठाँउहरुको संरक्षण तथा प्रर्वद्धनमा के के काम गर्नु भयो ?
रामेछाप नगरपालिकामा विभिन्न पुरातात्विक क्षेत्रहरु रहेको छ । प्राचीन इतिहास बोकेको केवलेश्वर महादेव मन्दिर, ताराखसे पोखरी आदि ठाँउहरु छन् । ताराखसे पोखरीमा पिकनिक स्पट सहितको पार्क निमार्ण भैरहेको छ । भालुकोट भन्नेठाँउमा भ्यू टावर निमार्ण गरेका छौ । प्याराग्लाइडिङका परीक्षण उडानहरु भैरहेको छ ।
तपाईले रामेछाप नगरपालिकाका जनताहरुका लागी देख्नु भएको सपना के हो ?
मैले नगरको नेतृत्व गर्दै गर्दा राज्यबाट नागरिकलाई दिने सबै सुविधाबाट बञ्चित नगरी घरघरमा सेवा पुर्याउने उदेश्य रहेको छ । स्थानीय सरकार नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने भएकाले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी घर घरमा सेवा पुर्याउने उदेश्य रहेको छ ।
स्थानीय तहको काँधमा अहिले विकासको ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । दुई दशक बढी समय जनप्रतिनिधिविहीन